नौमती बाजाको तालमा नाच्न जाने होइन त ‘झीँ गाउँ’? :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
झी, माघ ८
धौलागिरि हिमाल अगाडि नौमती बाजा बजाउँदै झिँ गाउँका स्थानीय। तस्बिरः सेतोपाटी
सुन्दर पहाडी थुम्को (२,५०० मिटर) टोड्केको काखमा मुस्कुराइरहन्छ झीँ गाउँ (१,७०० मिटर)। रघुगङ्गा गाउँपालिका–५, म्याग्दीमा पर्ने गाउँमा मगर र दलितका ३३५ घर छन्। मगर बाहुल्य गाउँ आकर्षक छ।
झीँ गाउँको नामका विषयमा रोचक कथा छ। गाउँभन्दा माथि तामा खानी छ जसलाई पहिलापहिला झीँ खानी भनिन्थ्यो। तिनताका त्यहाँको तामा ल्याएर गाउँमा व्यापार गरिन्थ्यो। बेनीतिरबाट माथि व्यापारिक थलोमा किन्न जाँदा झीँ जाने भनिन्थ्यो। त्यसो भन्दाभन्दै गाउँको नामै झीँ रह्यो।
म्याग्दी जिल्लाको झीं गाउँ
यहाँ ग्रामीण जीवनशैलीको सुवास पाइन्छ। गाउँबाट गुर्जा, चुरेन, मानापाथी, धौलागिरि, नीलगिरि, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे र लमजुङ हिमाल छर्लङ्ग देखिन्छन्। साथै धौलागिरि सेन्चुरी पदमार्ग, कुइनेमङ्गले गाउँ, पाखापानी, दर्मिजा र मल्काबाङको प्रवेशद्वार पनि हो झीँ गाउँ।
झीँबाट टोड्केसम्म सडक खुलेको छ, जिप वा मोटर बाइकमा यात्रा गर्न सकिन्छ। हिँडेर जाने हो भने झीँबाट डेढ घण्टा लाग्छ।
झीँमा वि.सं. २०७२ देखि होमस्टे शुभारम्भ गरिएको छ। मगरका १९ घरमा १०० बेड क्षमता छ। पाहुनालाई लोकल खाना (लोकल कुखुराको मासु, कोदो अनि मकैको ढिँडो, सिस्नुको सुप, निगुरोको तरकारी र कोदाको रक्सी) खुवाइन्छ। पाहुनाको मागअनुसार पुर्ख्यौली नाच, झ्याउरे गीत, थाली नाच र दोहोरीमा नाचगान गरिन्छ।
आलु, मुला, ओखर, टिमुर, सिन्की, गुन्द्रुक, घिउ र तरकारी झीँका कोसेली हुन्।
नौमती बाजाको रन्को
गाउँमा विशेषतः दलित समुदायले नौमती बाजा बजाउने चलन छ। नौमती बाजामा कर्नाल, नरसिंहा, दमाहा, टयाङ्कुली, झ्याली, सनही र ढोलक बाजा हुन्छ। त्यसैले समूहमा बाजा बजाइन्छ।
झीं गाउँको मगर समुदायले पनि महिना दिन अगाडिदेखि नौमती बाजाको तालिम लिइरहेको छ। उनीहरूलाई छिमेकी घतान गाउँका बरिष्ठ कलाकार रञ्जित परियारले सिकाइरहेका छन्।
तालिममा खिमबहादुर पाइजा, टकबहादुर पाइजा, गणेश पाइजा, निरज थजाली, शंख थजाली, यामप्रसाद पुन, पूर्णबहादुर थजाली, गंगालाल पाइजा, शबहादुर पुनलगायतले तालिम लिइरहेका छन्। उनीहरूले माघ १ गते नौमती बाजा बजाएर गाउँको परिक्रमा गरेका थिए।
गाउँका अगुवा पूर्णबहादुर थजाली र खिमबहादुर पाइजाको सक्रियातामा नौमती बाजा समूह तयार पारिएको हो।
‘कुनै पनि शुभकार्यमा बाहिरबाट नौमती बाजा ल्याएर बजाउँदा साँझ उनीहरूलाई आफ्नो गाउँमा फर्कन हतार हुन्छ’, थजालीले भने, ‘हामी गाउँलेले नै सिकेपछि अबेरसम्म गाउँमा नाचगान गर्न पाइने भयो। त्यसैले बाजा तालिम गराएका हौं।’
तालिमलाई स्थानीय गाउँपालिका र गाउँलेले पनि सहयोग गरेका छन्।
झीं पर्यटकीय गाउँ भएकाले अबका दिनमा पाहुनाको मागअनुसार नौमती बाजा बजाइनेछ।
सस्तो होमस्टे प्याकेज
डेकप्रसाद गर्बुजा, अध्यक्ष, सामुदायिक होमस्टे
हामी पाहुनालाई सस्तोमा खाना र बास सुविधा दिन्छौं। ननभेज डिनर, बेड र ब्रेकफास्टको ६०० रुपैयाँ मात्र तिरे पुग्छ।
होमस्टेमा बास बस्ने गरी हाम्रो गाउँ घुम्न आउने पाहुनाले बेलैमा खबर गरेर घाम नडुब्दै गाउँमा आइपुगेमा आबश्यक तयारी गर्न हामीलाई सजिलो हुनेछ।
काठमाडौं–बेनी २८२ कि.मि., बसमा ९ घन्टा। अथवा काठमाडौं–पोखरा हवाईयात्रा २५ मिनेट। पोखरा–बेनी ८२ कि.मि., बसमा ३ घन्टा । बेनी–अर्थुङ्गे–झीं १५ कि.मी, जिपमा १ घन्टा।
झीँ सामुदायिक होमस्टे
प्रकाशित मिति: शनिबार, माघ ८, २०७८, ०१:५७:००
अन्नपूर्ण क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकः व्यवसायी उत्साहित
ऐेंसेलु खाँदै नमोः बुद्ध हाइकिङ
कामीरिताले २६औं पटक सगरमाथा आरोहण गर्दै तोडे आफ्नै विश्व कीर्तिमान
मंगला जहाँ मन रमाउँछ...
पर्यटन प्रवर्द्धनको सूत्रः हाइटेकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म